अपराधको पराकाष्ठा- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
आखिर किन यस्ता घटना हुन्छन् ? अनि त्योभन्दा ठूलो अपराध गर्दै राजनीतिक आवरणमा किन यस्ता घटनालाई ढाकछोप गरिन्छ ? महरा, सांसद प्रक्राउ हुँदै पूर्वमन्त्री आफताव आलमको कुकर्म कुनै पनि हालतमा क्षम्य विषय होइनन् । यस्ता अपराधीलाई सामान्य कारबाहीमात्रै होइन, आजीवन जन्मकैदको सजाय हुनुपर्छ । आलम प्रकरणमा जुन यथार्थ बाहिर आइरहेको छ, त्यो क्रूरता र संवेदनाहीनताको पराकाष्ठा हो । जिउँदो मानिसलाई लठ्याएर बोरामा कोचेर इँटाभट्टामा लगेर जलाउनुलाई सामान्य अपराध मान्नु पनि अर्को अपराध हो । विडम्बना के भने राजनीतिक पहुँचको भरमा यस्ता घटना ढाकछोप गरिन्छ । होइन भने आलम १२ वर्षअघि नै जेलको चिसोपान गर्दै हुनुपथ्र्यो । साथै पछिल्लो अर्को जघन्य अपराध जुन निर्मला प्रकरण भनेर चिनिन्छ, त्यसका अपराधीहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । सुशासन कायम गर्ने हो भने लुकाइएका र दबाइएका अन्य अपराधको पनि स्वतन्त्र छानबिन गर्न प्रहरी प्रशासनलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । ‘१२ वर्षमा खोलो पनि फर्कन्छ’ भन्ने भनाइलाई चरितार्थ पार्दै ढिलै भए पनि भएको अनुसन्धान कार्यलाई स्वागत गर्नुपर्छ । यसले ढिलो–चाँडो हुनसक्छ, तर अपराध लुकाउन सकिन्न भन्ने सन्देश प्रवाह भई अपराध न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ ।
‘न्याय खोज्दाखोज्दै मारिइन्’ आमा पढेंँ । दृश्यले निकै गम्भीर बनायो । रौटहटको राजपुरमा १२ वर्षअघि बम विस्फोटपछि इँटाभट्टामा जलाएका छोराको न्यायका लागि रुक्सानाले निकै प्रयास गरिन् । उनले न्यायको साटो संसारबाट विदा भइन् । कानुनी राज्यमा योभन्दा अरु दु:खद दृश्य नागरिकले के हेर्छन् र भोग्छन् ? ढिलै भए पनि घटनाका दोषी कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री आलम पक्राउ परेका छन् । सत्य–तथ्य छानबिन गरी कडाभन्दा कडा कारबाही होस् र पीडितहरूले न्याय पाऊन् । अझै पनि जसको शक्ति उसैको भक्ति गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । दलहरूले समाजका गलत प्रवृत्तिलाई बढावा दिने, संरक्षण गर्ने, फाइदा लिने, राज्यको शक्तिमा पुर्‍याउने र आफ्नो हित अनुकूल प्रयोग गर्नाले समाजमा आपराधिक घटना न्यूनीकरण हुनुको साटो झन् बढेर गएको छ । सरकारमा जाने र राजनीतिक रूपमा प्रतिशोध साँध्ने कुरा त सामान्य बनिसकेको छ ।